Buurta Madow” ee dagaalka ka dhex qarxisay labo dal ee Armenia iyo Azerbaijan | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Warkii Buurta Madow” ee dagaalka ka dhex qarxisay labo dal ee Armenia iyo...
Buurta Madow” ee dagaalka ka dhex qarxisay labo dal ee Armenia iyo Azerbaijan
Armenia waxay ku dhawaaqday tallaabo militari oo ka dhan ah xukuumadda Azerbaijan kaddib muranka ka dhashay gobolka Nagorno Karabakh kaas oo horseeday dhimasho dad rayid ah, waxay labada dhinac midkoodba midka kale ku eedeynayaa in dagaalka ay bilowday, haatan, maxaan ka ognahay gobolka ay ku muransan yihiin labadan dal ee uu dagaalka ka qarxay?
Dagaalka ka dhex taagan labadan dal waa mid soo jiray muddo qarni ah, wuxuu ka dhashay loolanka ay ugu jiraan gacanta ku heynta gobolkaas ee u dhexeeya bulshada kiristaanka ee Armenia, Turkida muslimka ah iyo Persian-ka.
Waxaana gobolkan degi jiray muddo qarniyaal ah shacabka kiristaanka ee Armenia iyo Azeri, wuxuu qarnigii 19-aad kamid ahaa maamulkii Ruushka.
Gobolka ayaa ah mid xasiloon, inkasta oo mararka qaar ay dagaallo ka dhicin jireen halkaas, waxaana ka dambeeyay kooxo kasoo jeedo labada dhinac qarnigii 20-aad.
Kaddib dagaalkii koobaad ee adduunka, kacaankii Bolshevik ee Ruushka ee nidaamkii Soviet-ka waxay ku dhawaaqeen siyaasad ay ku maamulayaan gobolka Nagorno Karabakh oo ay ku nool yihiin inta badan shacabka Armenia, gobolkaas oo wuxuu xudduud la ahaa dowladdii Azerbaijan ee hoos tagi jirtay nidaamkii Soviet-ka sanadkii 1920s.
Markii ay dhacday dowladdii Soviet-ka dabayaaqadii siddeetamaadkii, waxaa gobolkan ka dhacay dagaal u dhexeeyay Armenia iyo Azerbaijan kaddib markii baarlamaanka gobolka ay u codeeyeen inay ku biirayaan Armenia.
Waxaana lagu qiyaasay dadkii ku dhintay dagaalka 20,000 ilaa 30,000 oo qof, waxaana inta badan gobolka la wareegtay Armenia, markii dambena waxay qabsadeen deegaan ku yaalla Azerbijan oo la yiraahdo Karabakh.
Markii uu dhacay nidaamkii Soviet-ka, Gobolka Karabakh wuxuu ku dhawaaqay madaxbanaani inkasta uusan wax aqoonsi ah ka helin dalalka dibadda iyo Armenia.
Inkasta oo aysan Armenia aqoonsan gobolka, waxay siin jireen taageero militari iyo mid dhaqaale.
Waxaan la kala saxeexday heshiis xabad joojin ah sanadkii 1994-tii, kaas oo suurogeliyay in gobolka Karabakh iyo qeybo kamid ah gobolka Azeri lagu daro Armenia.
Dagaalka waxaa ka barakacay in ka badan hal malyan oo qof, shacabka ka tirsan qowmiyadda Azeris waxay ka qaxeen gobolka Nagorno-Karabakh iyo Armenia halka shacabka Armenia ay ka qaxeen Azerbaijan. labadan qowmiyadood kuma aysan laaban guryahooda tan iyo dagaalka kaddib.
Waxaana dagaalka ku dhintay ciidamada labada dhinac, waxaana la xiray xadka Turkiga iyo Azerbijan, tallaabadaas oo dhibaato dhaqaale u horseeday Armenia oo ah dal aan bad laheyn.
Ruushka, Faransiiska iyo Mareykanka waxay hirgeliyeen ha’yad loo xilsaaray in lasoo afjaro dagaalka.
Afti laga qaaday gobolka Nagorno-Karabakh bishii Disembar sanadkii 2006-dii, Azerbaijan waxay aftidaas ku tilmaantay mid sharci darro ah.
Waxaa rajo laga qabay in heshiis la gaaro kaddib markii dhowr jeer ay kulamo wada qaateen madaxweyneyaasha Azerbaijan iyo Armenia.
Waxaa horumar laga gaaray heshiskii dhexmaray labada dal sanadkii 2009-kii, wuxuu intaas ka dambeeyayna waxaa muuqatay tallaabooyin lagu jebinayo heshiska, sanadkii 2016-kii waxaa labada dhinac kaga dhintay ciidamo tiro ah dagaal ka dhacay gobolka.
Axaddii, gobolka waxaa ka qarxay dagaal u dhexeeya ciidamada Azerbaijan iyo Armenia, waxaana lasoo riday diyaarad ay leedahay Azerbaijani, waxaana jiraa warar sheegayo in khaasare uu ka dhashay dagaalka.
Previous articleWafdi ka socda AMISOM oo gaaray Caasimadda Galmudug ee Dhuusamareeb kulana la yeeshay taliska 21-aad
Next articleMusharax xanuunka Carona u geeriyooday 2 todobaad ka hor oo doorasho lagu soo doortay duq magaalo oo ka dhacday dalka Romania.
Xildhibaan Mahad Salaad oo weerar Afkaa ku qaaday asedax...
Soomaaliya oo shir guddoominaysa shirka 75-aad ee golaha guud ee QM...